प्रतिगमनकारी शक्तिले नेकपा विभाजन गरायो : गृहमन्त्री थापा : RajdhaniDaily.com -
Home Breaking News प्रतिगमनकारी शक्तिले नेकपा विभाजन गरायो : गृहमन्त्री थापा
प्रतिगमनकारी शक्तिले नेकपा विभाजन गरायो : गृहमन्त्री थापा
ललितपुर । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिगमनकारी शक्तिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गराएको बताएका छन् ।
नेकपाको जिल्ला कमिटीले आज आयोजना गरेको ‘ललितपुर महानगरस्तरीय वृहत कार्यकर्ता भेला’ मा उनले मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने रणनीति प्रतिगमनकारीले नै सिर्जना गराएका भनाइ राखे । उनले भने, ‘उनीहरुले नेकपाको कमजोरी सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेको देखिन्छ, मुलुकमा नयाँ स्थायित्व र सुशासन कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हामीलाई चुनौती भइरहेको हुँदा यसको विरोधमा उभिनेछौँ ।’ अब इतिहासले सुम्पिएको नयाँ जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बेला भएको मन्त्री थापाले बताए ।
यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जनताका बीचमा जान कायल मात्र डराउने बताउँदै अब वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनमा सबैलाई जुट्न आग्रह गरे । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा निवर्तमान सांसद नवराज सिलवालले नेकपालाई तहसनहसन गर्न असन्तुष्ट नेता अभिएकाले सबैलाई मिलेर निर्वाचनमा जान अनुरोध गरे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले महिलालाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रपतिको पद दिएकाले उनको पथमा हिँड्नु प्रभावकारी हुने बताइन् । रासस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठक आज बस्दैछ । पदाधिकारी बैठक हिजोका लागि तय गरिएको भए पनि केही पदाधिकारीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको...
अक्सिजन अभावले बाँकेमा तीनस बेडकाे अस्पताल सञ्चालन हुन सकेन
नेपालगञ्ज । कोरोना हटस्पट बनेको बाँकेमा कोरोनाका बिरामी उपचार गराइरहेका अस्पतालमा अक्सिजन अभाव देखिन थालेको छ । अक्सिजन अभावकै कारण नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरले...
नगरप्रमुखले रिबन काटेर अस्पताल उद्घाटन गरे, उपप्रमुख भर्ना भइन्
वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको अस्थाई कोभिड अस्पताल तथा आइसोलेशन सेन्टरमा महानगरपालिकाकै उपप्रमुख पहिलो संक्रमितको रुपमा भर्ना भएकी छन् । दुई दिन अघि...
थपिए ८ लाख ४३ हजार मतदाता
काठमाडौं । पछिल्लो थपसहित देशभर १ करोड ६२ लाख ४३ हजार मतदाता संख्या पुगेको छ । निर्वाचन आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो संकलित...
सेनाले चीनको ग्वाङ्जाओबाट ल्यायो १८.८ टन स्वास्थ्य सामग्री
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले चीनको ग्वाङ्जाओबाट १८.८ टन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको छ । सेनाले खरिद गरेको उक्त स्वास्थ्य सामग्री नेपाल वायु सेवा निगम...
Breaking News Kumar Raut - March 23, 2020 0
काठमाडौं । फ्रान्सबाट कतार हुँदै शुक्रबार नेपाल आएका एक व्यक्तिमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जाँच गर्दा...
तिलोत्तमा पहिलो शुन्य पोलिथिन नगर
प्रदेश Dhruba Lamsal - March 13, 2020 0
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई मुलुककैं पहिलो शुन्य पोलिथिन र पूर्णसरसफाई उन्मुख नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । शुक्रबार नगर कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच नेपाल...
कोरोनामुक्त जीवनशैली : सरसफाइ र भौतिक दूरी
बिचार Kumar Raut - June 14, 2020 0
जीवनयापनमा केही सहज हुनेगरी ३० जेठबाट लकडाउन खुकुलो भएको छ । परीक्षणको अधिकतम मात्रा र क्षमताले हरेक दिन ३ अंकमा बढ्दै ५ हजार नाघिसकेको...
बिचार डा. प्रकाश बुढाथोकी - May 9, 2021 0
Breaking News राजधानी समाचारदाता - May 7, 2021 0
जागिर छोडेर डेरी उद्योग सञ्चालन
प्रदेश १ Sushila Bishwokarma - February 6, 2021 0
इलाम । छोरी माग्न जाँदा विहे गर्छु भन्दा ससुरा परे दोधारे भन्छन् तिम्रो छर के भर खोजी आउ पहिले सरकारी जागिर... यो गीत एक बेला...
नदीमा टिपर खस्दा चालक र सहचालक बेपत्ता
प्रदेश ६ भक्तबहादुर शाही - May 6, 2021 0
दैलेख । कर्णाली नदीमा मंगलबार राती १० बजे टिपर खस्दा दुईजना वेपत्ता भएका छन् । वेपत्ता हुनेमा टिपरमा रहेका चालक र सहचालक रहेको ईलाका...
५ सय ७९ को परीक्षण, सबैको नेगेटिभ ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’ तर सचेत बनौं
Breaking News Prem Shyangtan - March 22, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीसँग जुध्न महŒवपूर्ण कार्यक्रम अघि सारिरहँदा हालसम्म नेपालमै गरिएको परीक्षणमा कसैमा पनि कोरोना संक्रमण...
सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर ६ रेक्टरको भूकम्प
Breaking News Sushila Bishwokarma - September 16, 2020 0
काठमाडौं । बुधबार बिहान सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ । ५ बजेर १९ मिनेट जाँदा सिन्धुपाल्चोकको राम्चे आसपास केन्द्रबिन्दु भएर ६ रेक्टरस्केलको भूकम्प...
गुट नभई पार्टी प्रतिनिधि छान
कौशिला कुँवर - May 6, 2021